सह–महामन्त्री भएपछि के गर्छु भन्छन् उमाकान्त चौधरी ? | DNFMEDIA
सह–महामन्त्री भएपछि के गर्छु भन्छन् उमाकान्त चौधरी ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको चलिरहेको १४औं महाधिवेशनमा मन्त्री उमाकान्त चौधरीले थारु कोटामा सह–महामन्त्रीको उम्मेदवारी दिएका छन् ।
Previous: अमेरिकीमा आएको आँधीबाट मृत्यु हुनेको संख्या एक सय नाघ्यो
Next: सोलुखुम्बु एमालेका पूर्बअध्यक्ष राई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत